विमानको अवशेषहरु भेटियो: चालक दलसहित १८ जनाको शव फेला | चितवन पोष्ट दैनिक
विमानको अवशेषहरु भेटियो: चालक दलसहित १८ जनाको शव फेला
२०७० फाल्गुन ५, सोमबार १४:५७ गते
काठमाडौं । पोखराबाट जुम्लाका लागि आइतबार अपराह्न नेपाल वायुसेवा निगमको उडेको ९ एन–एबिबी–डिएचसी ६ नंको ट्वीनअटर विमान अर्घाखाँचीको मसिनेलेकमा फेला परेको छ ।
जलेर टुक्राटुक्रा भएको विमान अर्घाखाँची जिल्लाको भिकुरा गाउँ विकास समिति–८ स्थित खाँचीकोटको मसिनेलेकमा फेला परेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । विमान आइतबार दिउँसो काठमाडौँबाट जुम्लातर्फ उडेको थियो । पोखरामा रिफिउलीङ् गरी उडेको जहाज १ः१३ बजे भैरहवा विमानस्थलमा सम्पर्क गरेपछि सम्पर्कविहीन भएको थियो ।
जहाज दुर्घटनामा परी चालक दलका तीनसहित सबै १८ जनाको ज्यान गएको छ । सोमबार बिहान नेपाली सेनाको एनए–०४५, एएस–३५० हेलिकोप्टरले विमानको अवशेष मसिनेलेकमा पत्ता लगाएको थियो । साथै स्थानीयले पनि विमानको अवशेष मसिनेलेकमा देखा परेको जानकारी सुरक्षा निकायलाई दिएका थिए ।
विमान फेला परेको स्थान जिल्ला सदरमुकाम सन्धिखर्कबाट करिब चार घण्टाको पैदल दुरीमा रहेको छ । विमान फेला परेको सो लेकको उचाइ चार हजार ३०० मिटरमा रहेको छ ।
मृत्यु भएका सबैको शव नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौँ ल्याइएको छ । नेपाल वायु सेवा निगमका प्रवक्ता रामहरि शर्माका अनुसार दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका १५ यात्रु र चालक दलका तीन सदस्यको शव सेनाको हेलिकोप्टरले सोमबार अपराह्न ३ बजे राजधानी ल्याएको हो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट शव सोझै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल लगिएको र त्यहाँ परीक्षण गरेपछि आफन्तलाई बुझाइने बताइएको छ ।
अधिकांश शव डढेको कारण पहिचान गर्न गाह्रो हुने बताइएको छ । दुर्घटनास्थल भौगोलिक हिसाबले अप्ठ्यारो भएकाले उद्धारमा केही कठिनाइ भएको र शव सङ्कलन गर्नसमेत समय लागेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको उद्धार समन्वय केन्द्रले जनाएको छ । चालकदलमा पाइलट शङ्कर श्रेष्ठ, कोपाइलट रवीन्द्र बन्जारा र विमान परिचारिका मुना महर्जन हुनुहुन्थ्यो ।
त्यसैगरी यात्रुहरूमा मानव सेजुवाल, गौरी कठायत, दीपक श्रेष्ठ, टेकबहादुर महतारा, नन्दा महतारा, डी. महतरा, वर्षा हमाल न्यौपाने र उहाँका छोरा योगेश हमाल, उमा तामाङ, डा. विकल्प पोखरेल, डिपी उपाध्याय, राजेन्द्रप्रसाद देवकोटा, उमा श्रेष्ठ, कृष्णनाथ योगी र डेनमार्कका म्याथु थिसेम हुनुहुन्थ्यो । उनीहरु सवैको मृत्यु भएको र शव नचिनेने अवस्थामा रहेको छ ।